Chọpụta pikselụ nwụrụ anwụ na Nyochaa Nyocha, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Izu ụka nke mechara taa bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka usoro nke n'efu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ma onye mụ na ya na José na sava, anyị na-agwa gị gbasara ngwa dị iche iche nke nwere obere oge dị maka nbudata n'efu. Taa Fraide anyị na-ekwukwa ọzọ maka ngwa dị n'efu, ngwa ga-enyere anyị aka ịchọpụta pikselụ nwụrụ anwụ. Nyochaa ule nwere ọnụahịa mbụ nke euro 0,99 ọ ga - enyere anyị aka ịchọpụta pikselụ nwụrụ anwụ nke onye nlebanye anya m wee kwuo na ọ ga - enyere anyị aka n'ihi na ngwa ahụ n'onwe ya enweghị ike ịchọpụta ha.
Dịka m kwuru n'elu, ngwa ahụ anaghị elekọta akpaghị aka n'ịchọpụta pikselụ ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ ọ ga-egosi anyị usoro nke ndabere siri ike na ileba anya iji chọpụta pikselụ ojii, nke ụcha ya na-egosi na ha agabigala. Ọrụ nke ngwa a dị mfe, ọ chọghịkwa nnukwu ihe ọmụma kọmputa.
Ozugbo ngwa ahụ gbara ọsọ, anyị ga-ahọpụta ihe nlele nke anyị chọrọ ịgafe ule ahụ iji chọpụta ma ọ nwere pikselụ nke ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọzọ anyị ga-pịa Malite Ule. Mgbe ahụ ngwa ga-amalite na-egosi dị iche iche na akwụkwọ ahụ aja ka anyị chọọ ndị na-abụghị ịrụ ọrụ pikselụ. Iji gbanwee agba nke ihuenyo ahụ, nke ga-enyere anyị aka ịchọpụta ya nke ọma, naanị anyị ga-pịa igodo ọ bụla. Iji pụọ na ule ahụ, anyị ga-pịa igodo ESC. Nyocha Nyocha dị na Bekee naanị, bụ 0.1 MB na nha, ma dakọtara na OS X 10.8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ chọrọ 64-bit ka ọ rụọ ọrụ na nwelite ikpeazụ nke ngwa a nwetara bụ afọ ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Chọpụta pikselụ nwụrụ anwụ na Nyochaa Nyocha, n'efu maka obere oge
ForkLift maka Mac, n'efu maka obere oge